သန္ဓေအောင်ခြင်း၏ လက္ခဏာ ၅ ချက် - Hello Sayarwon
သားဥကြွေခြင်းသည် အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ ပုံမှန် ရာသီစက်ဝန်း နှင့် ဆက်စပ်သည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သားဥကြွေလျှင် ဖြစ်ပွားသော ဟော်မုန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများနှင့် ယှဉ်တွဲနေသည်။ ရှုပ်ထွေးသော နည်းလမ်းများနှင့် ဈေးကြီးသော ပစ္စည်းကိရိယာများအစား ခန္ဓါကိုယ်၏ အချက်ပြမှုများကို သတိထားခြင်းဖြင့် သားဥကြွေမည့် အချိန် နှင့် သန္ဓေအောင်မည့် အချိန်ကို ကြိုတင် ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ဒီဆောင်းပါးတွင် သန္ဓေအောင်ခြင်း၏ အသိသာဆုံးသော လက္ခဏာ (၅) ခုကို ဖော်ပြထားသည်။
၁။ ဓမ္မတာလာချိန်၏ ထူးခြားသော လက္ခဏာ
ပုံမှန်မဟုတ်သော ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ခုမှာ ဓမ္မတာမလာခြင်းဖြစ်သည်။ သားဆက်ခြားဆေးများ အသုံးပြုခြင်း ရပ်တန့်ပြီးလျှင် ခန္ဓါကိုယ်သည် ပုံမှန်ဓမ္မတာလာရန် လအနည်းငယ် စောင့်ဆိုင်းရတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မတာမလာသေးခြင်းသည် ကိုယ်မရှိသေးခြင်းလဲ ဖြစ်နိုင်သေးသည်။ သုံးလကြာပြီးနောက် ဓမ္မတာမလာမှသာလျှင် ဆရာဝန် နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်သည်။
ဓမ္မတာမလာခြင်းအပြင် ဓမ္မတာပုံမှန်မလာခြင်းသည် သန္ဓေအောင်ရန် ခက်ခဲခြင်းကို ပြသော လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သော ရာသီစက်ဝန်းသည် သားဥအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း (သို့) Endometiosis ဟုခေါ်သော သားအိမ်နှင့် ပတ်သတ်သည့် ရောဂါကြောင့် သားဥမကြွေနိုင်သော လက္ခဏာကို ပြသည်။
၂။ သားအိမ်ခေါင်းအကျိအချွဲ၏ တည်မြဲသော ပြောင်းလဲမှု
ကျိချွဲ၊ ပျစ်ထူပြီး သတိမထားမိသော အရည်ဆင်းခြင်းသည် သားဥကြွေချိန်မဟုတ်သော အချိန်များတွင် အဖြစ်များသော လက္ခဏာများ ဖြစ်သည်။ သို့သော် သားဥကြွေချိန်နီးလာလျှင် ခန္ဓါကိုယ်သည် အီစတရိုဂျင်(Estrogen) ဟုခေါ်သော ဟော်မုန်းကို သဘာဝအတိုင်းထုတ်လွှတ်သည်။ Estrogen များစွာ ရှိလာလျှင် သားအိမ်ခေါင်း၏ အကျိအချွဲများကို ကြက်ဥအကာကဲ့သို့ ပျစ်ချွဲစေသည်။ အကယ်၍ ဒီလက္ခဏာများကို တွေ့လျှင် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသင့်သည်။ မပြောင်းလဲပဲ ဆက်လက်ရှိနေလျှင် ဒီလက္ခဏာသည် သန္ဓေအောင်ခြင်း၏ တိကျသော လက္ခဏာဖြစ်သည်။
သားဥကြွေချိန်တွင် ရင်သားသည် ပို၍လေးလံခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း နှင့် နာကျင်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပရိုဂျက်စတရုန်း (Progestrone) ဟုခေါ်သော ဟော်မုန်းထွက်ပေါ်ခြင်းသည် ရင်သားနာကျင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့သော အမျိုးသမီးများသည် သားဥကြွေချိန်တွင် ရင်သားနာကျင်ခြင်းကို သတိထားမိတတ်ကြသည်။ သို့သော် အချို့သည် သားဥကြွေပြီးမှသာ အာရုံခံစားမှုကို သိရှိကြသည်။
၄။ သားအိမ်ခေါင်း၏ ပြောင်းလဲချက်
သန္ဓေအောင်သော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တွင် သားအိမ်ခေါင်း၏ ပြောင်းလဲခြင်းသည် များစွာသိသာသည်။ ဓမ္မတာလာပြီးချိန်တွင် သားအိမ်ခေါင်းသည် မာ၍ ပိတ်နေပြီး အောက်ဘက်တွင် ရှိနေသည်။ သားဥကြွေချိန်တွင် သားအိမ်ခေါင်းသည် ပုံမှန်ထက် ပွင်ေ့နတတ်ပြီး အပေါ်ဘက်သို့ ပိုရောက်နေကာ နူးနူးညံ့ညံ့ရှိနေတတ်သည်။
၅။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပို၍ဆွဲဆောင်မှုရှိလာခြင်း။
ခန္ဓါကိုယ်၏ အလှ နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုမားကို မြင်တွေ့နိုင်ရန်မှာ မိတ်ကပ်များကို မလိုအပ်ပါ။ သားဥကြွေနေချိန်တွင် ပြည့်ဝသော နှုတ်ခမ်း၊ ကျယ်ဝန်းသော သူငယ်အိမ်၊ ချောမွေ့နူးညံ့သော အသားရည်၊ estrogen ဟော်မုန်းများနေခြင်းကြောင့် ပြောင်းလဲနေသော အသံ စသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုလှပမှုများကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။
လေ့လာချက်များအရ တစ်လတစ်ခါ ရာသီစက်ဝန်းတွင် ထိုသို့ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလဲချက်များသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုမိုရှိစေရုံမက လက်တွဲဖော်ကိုလဲ ပို၍ ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ကလေးရရှိစေရန်လည်း ကောင်းမွန်သော စိတ်ခံယူချက်ကို ရရှိစေသည်။
မိခင်ဘဝတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း၏ လက္ခဏာများ (သို့) သန္ဓေအောင်ခြင်း၏ လက္ခဏာများကို စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသော ခံစားချက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ရင်သွေးရရှိခြင်း၏ အကြောင်းအချက်များကို ဂရုစိုက်နေခြင်းဖြင့် သန္ဓေအောင်မည့် သားဥကြွေချိကို အစောဆုံးသိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့သိရှိခြင်းသည် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် ရှိသင့်သိသင့်သော အရည်အချင်းများထဲမှ တစ်ခုလဲဖြစ်သည်။
Fertility awareness. http://www.webmd.com/infertility-and- reproduction/fertility-awareness.
Signs of Fertility.https://nortonhealthcare.com/pages/signsoffertility.aspx. Accessed December 5,
Ovulation Symptoms: Top 10 Signs of High Fertility. http://www.justmommies.com/getting-
pregnant/fertility-charting- ovulation-and- prediction/ovulation-symptoms- top-10- signs-high-
fe?slide=2. Accessed December 5, 2016.